Doorashada madaxweynaha Galmudug oo markii seddaxaad dib loo dhigay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada madaxweynaha Galmudug oo markii seddaxaad dib loo dhigay (DHAGEYSO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in markale uu dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug, taas oo la filaayay in maalinta berri ah ay ka dhacdo magaaladaas.
Guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug Xildhibaan Maxamed Xasan Geelle oo maanta magaalada Cadaado warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in sababta dib loogu dhigay doorashada ay tahay arrimo farsamo awgeed.
Wuxuu guddoomiyaha sheegay in doorashada dib loogu dhigay illaa 3-da bisha soo socoto ee May, isagoona carabka ku adkeeyay in maalintaasi Galmudug ay xaqiijin doonto in la doorto madaxweynaha maamulkaas hoggaamin doonna.
“Waxaan rabnaa inaa shacabka Galmudug u sheegno in doorashadii lagu ballansanaa in 30-ka bishaan ay ku dhacdo ay dib uga dhacday arrimo farsamo awgeed, waxayna dhici doonto 3-da bisha soo socoto ee May, mana jiri doonto in dib u dhac kale markale ku yimaado doorashada, hadii ay dib u dhac kale dhacdo xilka waa wareejinayaa” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug xildhibaan Maxamed Xasan Geelle.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in illaa 3 musharax ay haatan buuxiyeen shuruudaha laga rabo musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha Galmudug, waxaana la filayaa in kahor doorashada ay khudbadahooda kahor jeediyaan xildhibaannada baarlamaanka maamulkaas.
Si kastaba ha ahaatee, dib u dhacaan ku yimid doorashada madaxweynaha Galmudug ayaa noqonaysa markii seddaxaad oo ay dib uga dhacdo xilliga lagu ballansanaa inay doorashadu ku dhacdo.